प्रहरीका हाकिमले अपरा’धीसँग मिलेर आफ्नै ८ पुलिसको ह’त्या गराएकाे खुलाशा! (भिडियो हेर्नुस्) – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/प्रहरीका हाकिमले अपरा’धीसँग मिलेर आफ्नै ८ पुलिसको ह’त्या गराएकाे खुलाशा! (भिडियो हेर्नुस्)
भारतीय मोष्ट वान्’टेड अपराधी बिकास दुबेको कल डिटेल हेर्दा प्रहरीकै अधिकारीको मिलेमतो देखिएको छ । उनले शुक्रबार ८ प्रहरीको गो ली हा नी ह त्या गरेका थिए । अपरा’धी बिकास दुबेको घरमा छापा हा न्न गएका डिएसपीसँगै अन्य सबै प्रहरीको दुबेले ह त्या गरेका थिए । उनलाई छापा हान्ने सुचना चौबेपुर थानाका एक प्रहरी निरिक्षकले दिएको पत्ता लागेको छ । प्रहरीले २४ जनालाई पक्राउ गरि यस सम्बन्धमा सोधपुछ गरिरहेको छ ।
प्रहरीले नै छापा हा न्न लागेको सुचना चुहाएपछि दुबेले जेसीबीले छापा हा न्न आएका प्रहरीको बाटो छेकेका थिए । प्रहरी अघि बढेपछि ३ तिरबाट आ क्र म ण गर्दै ८ प्रहरीको ह त्या भएको थियो । दुबेलाई पक्राउ गर्नेलाई सरकारले ५० हजारको इनाम तोकेको छ । २० जिल्लाका प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेका छन् तर उनलाई प्रहरीकै संरक्षण प्राप्त भएको अनुमान गरिएको छ ।
भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको कानपुरमा लामो समयदेखि अपरा’धमा संलग्न रहेको भनिएका अभियुक्तको घर घेरा हाल्न पुगेको प्रहरीमाथि त्यहीँ रहेका ह ति या र धारीहरुले आ क्र म ण गर्दा एकजना डिएसपीसहित आठ जना प्रहरीको ज्यान गएको थियो । सो घटना शुक्रबार बिहान सबेरै भएको थियो ।
विकास दुवे नाम गरेका लामो समयदेखि अपरा’धमा संलग्न रही आएका भनिएका ती व्यक्तिको घरमा उनीसहित अरु पनि केही अपरा’धी रहेको भन्ने आशंकामा प्रहरीले शुक्रबार बिहान उनको घर घेरा हालेको थियो । तर सोही क्रममा सो घरभित्र रहेको आशंका गरिएका ती व्यक्तिले नै गो ली चलाएका थिए । गो ली लागेर प्रहरीका एक डिएसपी देवेन्द्र मिश्रसहित आठ जना प्रहरीको घटनास्थलमै ज्यान गएको बताइएको थियो ।
शुक्रबारै बिहान सो क्षेत्रमा उत्तर प्रदेश प्रहरीका प्रमुखसहितको ठूलो संख्याको प्रहरी घटनास्थलमा पुगेको बताइएको थियो । उनीहरुले घटनास्थलमा पुगेर थप अनुसन्धान थालेको बताएका छन् । त्यस घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ । उत्तर प्रदेश राज्यका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले घटनामा ज्यान गुमाउने प्रहरी अधिकारीहरुप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्नुभएको थियो ।
उहाँले उक्त घटनाको गहिरो अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न उत्तर प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभएको समाचारमा जनाइएको थियो ।
६ वर्षको उमेरमा ‘सिक्स प्याक’ !
काठमाडौँमा भयाभह बन्दै कोरोना, टिचिङ अस्पतालका २ डाक्टर सहित ७ जनामा संक्रमण पुष्टि